Ciidamada dalka Zimbabwe oo lagu eedeeyey inay gaysanayaan tacadiyo dadka shacabka ah – Radio Daljir
Janaayo 23, 2019 6:13 b 0
Koox u ololaysa xuquuqda aadanaha oo ay dowladda Zimbabwe ay magacowday ayaa ku eedeeyey ciidamada dowladda inay jirdil iyo tacadiyo u gaysanayaan dadka dibadbaxyada ka dhigaya caasimadda dalkaasi ee Haraare.
War Qoraal ah oo kasoo baxay guddigan ayaa lagu sheegay ugu yaraan sideed qof oo shacab ah in la dilay tan iyo todobaadkii lasoo dhaafay, kuwaasi oo loo adeegsaday rasaas nool.
“Ciidamo hubaysan oo ku labisan dhaka ciidmaada qaranka ee Zimbabwe ayaa gaystay tacadiyo jirdil, waxaana la bililaqaystay hanti iyadoona dad badana la laalayay” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay Zimbabwe.
Dibadbaxyo waawayn ayaa ka socda dalka Zimbabwe oo looga soo horjeedo qiimaha shidaalka ee kor usii kacaya , waxaana naaftada qiima ahaan ay gaartay 3.11 doolar, halka baasiinkana uu gaaray 3.31 , waana qiimaha ugu badan ee caalmka uu shidaalka ka gaaro.
Rabshadaha sii socda ayaa waxaa kasoo baxaya su’aalo la iska waydiinaya inay ka amarqaataan madaxwaynaha dalka Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, kaasi oo xukunka dalkaasi 14 bilood kahor militariga ay ku wareejiyeen.
Madaxwayne Mnangagwa ayaa dhankiisa waxaa uu balanqaaday inaan loo dulqaadan doonin jirdil loo gaysanayo dadka shacabka ee wadankaasi.
Mareykanka iyo Venezuala oo xiisaddoodo gaartay meeshii u saray, kadib